Sida loo xisaabiyo Soo noqoshada Maalgashigaaga Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Maaddaama suuqleyda iyo aaladaha warbaahinta bulshada ay qaan gaadhaan, waxaan wax badan ka ogaaneynaa dul iyo hoos u maalgelinta warbaahinta bulshada. Waxaad arki doontaa inaan inta badan dhaliilo ka bixiyo rajooyinka ay dajiyeen lataliyayaasha warbaahinta bulshada - laakiin taasi micnaheedu maahan inaan dhaliil u leeyahay baraha bulshada. Waxaan keydsadaa tan iyo waqti iyo dadaal aniga oo la wadaagaya xikmadda asxaabta iyo la sheekaysiga magacyada internetka. Shaki iigama jiro in waqtigeygii aan ku qaatay baraha bulshada ay maalgashi aan caadi aheyn u aheyd shirkadeyda, daabiciddeyda, iyo shaqadeyda.
Arrintu waa arrin ka mid ah filashooyinka iyo cabbiraadda, in kastoo. Waa tan tusaale: Macaamilku wuxuu ka cabanayaa isagoo adeegsanaya Twitter shirkadduna si dhakhso leh ayey uga jawaabaysaa, iyadoo si dhammaystiran u saxaysa arrinta macmiilka si cadaalad ah oo waqtigeeda ku habboon. Dhageystayaasha macaamiisha ah waxay arkeen dhaqankaas oo hadda waxay leeyihiin aragti wanaagsan oo shirkadda ah. Sideed u cabirtaa soo celintaas maalgashiga? Waqti ka dib, waxaad awoodi kartaa inaad cabirto dareenka astaantaada oo aad kuxirato dakhliga guud iyo haynta… laakiin ma sahlana.
44% CMOs waxay yiraahdaan ma aysan awoodin inay cabiraan saameynta warbaahinta bulshada ganacsigooda. Si kastaba ha noqotee, waa gabi ahaanba lagu guuleysan karo shirkadaha dhammaan noocyada
Badanaa maahan, shirkaduhu waxay rabaan inay cabiraan suuqgeynta warbaahinta bulshada ROI adoo si toos ah ugu sifeynaya soo dejin, demo, diiwaangelin, ama iibin ku saabsan cusbooneysiinta Tweet ama Facebook. In kasta oo taasi ay tahay saamiga ugu hooseeya ee guud ee warbaahinta bulshada ROI, had iyo jeer maahan wax macquul ah. Rajadaadu ma ku socotaa warbaahinta bulshada si ay u iibsadaan alaabtaada ama adeeggaaga? Shaki badan ayaa ku jira warshadaha badankood - in kastoo ay dhacdo waqti ka waqti.
4 Talaabo oo lagu cabirayo soo noqoshada suuq geynta baraha bulshada
Maskaxda ku hay in laga yaabo inaadan ku haynin goobta waqtiga aad go'aansato inaad bilowdo cabirka. Waxaa laga yaabaa inay kaaga baahan tahay inaad dejiso ilo iyo miisaaniyad aad uga shaqeyso warbaahinta bulshada ugu yaraan dhowr bilood si loo go'aamiyo waxa soo noqoshadaadu tahay.
Qeex Hadafyada La Cabbiri Karo - Waxay noqon kartaa mid fudud sida wacyigelinta dhismaha ama aad ugu sii fogaato hawlgelinta, dhismaha maamulka, beddelaadda, haynta, kor u qaadista, ama hagaajinta khibradda guud ee macaamiisha.
Ku qiimee fal kasta - Tani waa hawl adag, laakiin waa maxay qiimaha ay leedahay barashada, kaqeybgalka, iyo u adeegida macaamiishaada baraha bulshada? Waxaa laga yaabaa inaad kala soocdo rajooyinkaaga iyo macaamiishaada - isbarbardhiga kuwa ku raacaya ee kula macaamilaya khadka tooska ah iyo kuwa aan ahayn. Miyuu kordhay haynta? Fursadaha kor u kaca oo kordhay? Waqti deg deg ah oo la xidhayo? Qiyaasta weyn ee qandaraasyada?
Xisaabi Qiimaha Dedaalkaaga - Waqti intee le'eg ayay u baahan tahay sidee se taasi ugu tarjumaysaa shaqaalaha iyo maamulka? Immisa ayaad ku bixineysaa meheradaha si aad u maamusho warbaahinta bulshada? Immisa lacag ah ayaad isticmaaleysaa markaad lacag celinayso ama qiimo dhimis ku samaynayso arrimaha adeegga macaamiisha? Ma waxaad lacag ku bixineysaa cilmi baaris, tababar, shirar, iwm. Dhammaantood waxay u baahan yihiin in lagu daro xisaab kasta oo ROI ah.
Go'aami ROI - ((Wadarta Dakhliga Loogu Tala Galay Warbaahinta Bulshada - Wadarta Qiimaha Warbaahinta Bulshada) x 100) / Wadarta Kharashka Warbaahinta Bulshada.
Waa tan faahfaahinta buuxda ee MDG, oo dabooleysa sida loo qeexo ujeedooyinka la qiyaasi karo, qiimeynta waxqabad kasta, iyo xisaabinta qiimaha guud ee dadaalkaaga Sida loo Cabiro Baraha Bulshada ROI:
Tags: infographicmdgku soo noqo maalgashigaROIficilka warbaahinta bulshadadhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshadakharashka warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ee infographicwarbaahinta bulshada roiqiimaha warbaahinta bulshada
Farqiga U Dhexeeya SEO Iyo SEM, Laba Farsamooyin Lagu Qabto Isku Socodka Websaydhkaaga